Tabilao fisotroana kafe avo lenta China YF-2001 izay manaitra anao amin'ny fomba tsara indrindra mpanamboatra sy mpamatsy | Yifan
Ny latabatra kafe fitehirizana ambony dia manome fomba sy fitehirizana be dia be ho an'ny toeram-ponenanao ankehitriny. Ny fifangaroan'ny singa maloto dia manampy ny hafanana ary koa ny fomba manja amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitranonao miaraka amin'ny voamadinika vita amin'ny hazo sy ny famaranana volondavenona. Nitraka ny takelaka iray manontolo hanehoana faritra fitehirizana be etsy ambany, mety tsara mba hanafenana ireo lavitra, morontsiraka, na kojakoja lalao aza. Mifanohitra tanteraka amin'ny tsipika miolakolaka sy mahitsy
LIFT TOP DESIGN: Ny tabilao dia azo nakarina ambony sy mandroso mba hamorona tontolon'ny asa, ny mekanisma avo lenta dia ahafahana manandratra na mampidina ambany ny tablety ary tsy mitabataba; miaraka amin'ity latabatra ambony avo lenta ity dia tsy mila miankohoka mafy ianao raha hampiasa ny solosainao finday, manoratra na misakafo eo ambony latabatra rehefa miala sasatra eo ambony sezalava
SAFITRA SAFY: komparty miafina ao ambany dia natao hitahiry ireo entana be mpampiasa matetika toy ny magazine, solosaina finday, chess, mpanera lavitra, mpanara-maso lalao sns, mitazona azy ireo ho mora ampiasaina sy tsy misy loto; ny talantalana misokatra ambany dia afaka mitazona lamba firakotra, snacks na knick-knacks
SOLID & STABLE: Ity latabatra kafe ity dia vita amin'ny MDF sy metaly metaly metisy P2 manara-penitra, ny rafitra miorina sy miorina dia tsy hihetsika ary afaka mitazona 68 kg / 150 lb amin'ny totaliny
STYLE MINIMALISTA: Ity latabatra maoderina sy ankehitriny ity dia tsotra amin'ny endrika sy loko miloko, afaka mifanentana tanteraka amin'ny fomba sy ny haingo amin'ny efitranonao; latabatra kafe azo ampiharina sy tsara amin'ny toerana kely, miasa tsara amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy birao
Fivoriambe tsy misy ahiahy: Tonga miaraka amin'ny fitaovana ilaina rehetra ary boky torolalana an-tsary manampy anao hametraka ity latabatra kafe ambony ity haingana sy tsy misy olana.
Previous: YF-H-907 efitrano fandraisam-bahiny vita amin'ny hoditra
Latabatra kafe misy ambony avo azo avo
Latabatra fisaka ambony latabatra
Latabatra fiasa maro karazana